Maxaad WonderfulPCB - Shenzhen Wonderful Technology Co., Ltd
Adag-hayalka san PCB
Adeegga Golaha PCB
qaybaha soo iibsiga
PCB noqda Quick
Adeegga La dedejiyey
Blind / Via aasay
QCS sunta PCB
QCS Waayo, Golaha PCB
PCB Wonderful sida soo saaraha ah taasoo keentay iyadoo in ka badan 20 sano waayo-aragnimo ee PCB (Daabacidda Circuit Board) Warshadaha.
Waxaan ku takhasusay soo saarka iyo iibinta-sax sare,-cufnaanta sare PCBs double-madaxyo simanna iyo PCBs multilayer.
Saaraha si toos ah adeegyada binta & macaamiisha soo dejin doonaa noo guuleysan-guuleysan xiriirka iskaashi!
Heerarka Tayada shahaado
Sababta ugu muhiimsan sababta aynu ku jirno soo saaraha ah PCB doorbiday macaamiisha adduunka oo dhan waa u hogaansanaanta our in heerka tayada adag oo khuseeya meel walba oo ka mid ah warshadaha. Tusaale ahaan, PCBs our caadiga ah la kulmo dalbanayaan heerka tayada IPC2, halka loox hoggamiye waxaa soo saaray si loo gaaro IPC1 waafaqsan. Intaa waxaa dheer, adeegyada shirka our buuxiya shuruudaha IPC3 caadiga ah. Waxaan nahay si buuxda u waafaqsaneyn ISO9001: 2008 nidaamka maamulidda tayada.
Tayada Balanqaad la Reviews Tayada In-guri Our
Waxaan fuliyo tiro ka mid ah tallaabooyinka firfircoon si loo xaqiijiyo tayada hababka iyo waxyaabaha our. jeegaga kooxda injineernimada Our soo maray design kasta PCB ka hor bilowga wejiga soo saarka / kiniisadda si loo hubiyo in ay jiraan ayna duleella u lahayn soo jireenka ah iyo in design buuxiyey caddaymaha saxda ah macaamiisha ah ee. Waxaan qaadan talaabo dheeraad ah ee qabashada Design ah imtixaanka Warshadaha (DFM) ee lacag dheeraad ah. Waxaan sidoo kale waxay leeyihiin waax buuxda oo tayo leh ay gacanta ku shaqaalaha si ay u qabtaan baaritaan iyo baaritaan dhamaystiran ka hor maraakiibta alaabta la dhammeeyayna ay si aad xarunta, oo ay ku jiraan Test korontada, Automated indhaha Inspection (AOI), Automated X-ray Inspection (AXI), iwm Waxaad heli kartaa kalsooni buuxda oo tayo aad PCB iyo waxqabadka.
Save waqti iyo u noqon wax ku ool ah
Waxaan bixinaa adeegyo Golaha PCB macasha Full, taas oo ka mid ah been PCB, soo iibinta qayb ka, iyo shirkii PCB. Our adeegga one-stop masaxdaa baahida loo qabo in aad si ay u maareeyaan dhowr qeybiyeyaasha guud ahaan waqtiyada kala duwan, sidaas sii kordhaya aad hufnaan iyo kharashka-oolnimada. Sida shirkad dhexdhexaad ah, aan si buuxda u jawaabaan baahida macaamiisha our 'iyo siin karaan adeegga ku habboon iyo shakhsiga in shirkadaha waaweyn ma la jaanqaadaan karo. heerka qanacsanaanta macmiilka lagu dayan karo waa markhaati u tahay awoodda aan u leenahay inuu soo jiito.
binta la awoodi karo oo tartan
Haddii aad raadinayso a PCBs yar ama kun oo PCBs, waxaad naga heli doontaa adeegyada qiimaha suurto gal PCB ugu fiican.
Adeegga Macaamiisha u fiican
Waxaan rabnaa in ay bixiyaan adeegyada ugu sareeya PCB qiimaha iyo waayo-aragnimo ugu weyn ganacsiga ee qiimo wanaagsan. Waxaan ka qaban kumanyaal tirada qayb ku salaysan sanadlaha ah iyo inta lagu jiro our 20 sano oo qaliin taariikhda, waxaan ku bartay sida si ay ugu adeegaan dadka macaamiisha noo ah iyo sida ay si fiican u adeegtaan. Kuwani waa uun qaar ka mid ah waxyaalaha macaamiisheena sida noo ku saabsan:
• Tilmaamo Instant online xiganaya, xigsiin iyo reordering
• Adeegyada Tayada balan qaadayo
• qiimaha tartanka & NO min si tirada loo baahan yahay
• 99% + heerka qancinta macaamiisha
• kooxda taageerada oge heli via telefoonka iyo email
• Free DFM jeeg by injineerada xirfadeed
• Baaritaanka Function ku salaysan shuruudaha gaarka ah ee macaamiisha ee
• No lacag tooling dheeraad ah reorders PCB
Fadlan email wonderfulpcb@wonderfulpcb.com for info dheeraad ah ama xiriir US online
Cinwaanka: NO.6A, Dhismaha FengYeDaSha, NanShanRoad | NanShan